माग्नेले १० लाख पारिश्रमिक किन लिए ? - Lumbini Times
1,381 views | लुम्बिनी टाइम्स | ३ माघ ।
उनले यस सिनेमामा काम गरेवापत लिएको १० लाख पारिश्रमिक धेरैलाई अपत्यारिलो बन्नपुग्यो । अझैपनि उनलाई पारिश्रमिकका बारेमा अनेकथरि प्रश्न आउन छाडेका छैनन् । माघको अन्तिमबाट छायांकन सुरु हुने यो सिनेमामा उनले लिएको १० लाख पारिश्रमिक बारे हामीले उनलाई केही प्रश्न गरेका छौँ ।
सिनेमामा के देखेर तपाईले दश लाख पारिश्रमिक लिनुभयो ?
मैले बाहिरी ब्यानरबाट सिनेमामा काम नगर्ने भनेर धेरै सिनेमा रिजेक्ट गरेको थिएँ । कुनै कार्यक्रममा जाँदा सिनेमा रिजेक्ट गरेको मान्छे मात्र भेटिने पनि अवस्था भएको थियो ।
माग्ने ठूलो भएको छ मेरो सिनेमा खेलेन भन्ने जस्तो भएको थियो । माग्ने ठूलो भएको छैन है भन्नका लागि पनि बाहिरी ब्यानरमा काम गर्नुपर्ने थियो । स्क्रिप्ट राम्रो र दशलाख पारिश्रमिक पाए भने खेल्छु भन्ने सोंचेको थिए । टिममा पनि यही सल्लाह भएको थियो । त्यो पछि कुरा आउँदा दीपा दिदीले हुन्छ भनिदिनु भएछ ।
दीपकराज गिरी र दिपाश्री निरौलाले बाहिरी ब्यानरमा खेलिसके पछि भित्रको टिमका साथीले पनि बाहिरी ब्यानरको सिनेमा खेल्न पाएको हो भन्ने कुरामा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
त्यस्तो होईन । उहाँहरुले एकवटा सिनेमा बाहिरी ब्यानरमा गरौँ न त एक वर्ष सम्म के यत्तिकै बस्नु भनेर काम गरेको हो। उहाँहरुले बाहिरी ब्यानरमा काम गरेर हामीले चान्स पाएको भन्ने कुरा भने सबै गलत हो ।
मिडियामा तपाईहरुको टिमका साथीलाई बाहिरी ब्यानरबाट सिनेमा गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा किन आइरहेको छ ?
त्यस्तो केही पनि होईन । मत अहिले पनि भन्छु की हामीले सफल बन्ने हो भने टिमभन्दा बाहिर छरिएर काम गर्नुहुदैन । किनकी नेपाली दर्शकले हामीलाई एकत्रित भएर आउँछौँ भनेर माया गर्नु भएको छ।
‘वडानम्बर ६’ देखि ‘छक्का पन्जा २’को यात्रा तय गर्दा सम्म यो यूनिटलाई नै दर्शकले मन पराइदिनु भएको हो ।
तपाईलाई यो सिनेमामा काम गर्दा कत्तिको डर अथवा च्यालेन्जिङ्ग लागि रहेको छ ?
मलाई एकदमै डर छ । त्यही भएर कथा अलिकति हेरेर र चित्त बुझेको भएर मात्रै मैले यो सिनेमा साइन गरेको हो । सिनेमामा विल्सन विक्रम राई, रविन्द्रझा, पूजा शर्मा, शुदर्शन थापालगायतको टिम हुनुहुन्छ ।
त्यसपछि मैले उहाँहरुसँगको कुराकानीमा म नआएको भए बेग्लै थियो तर म आइसकेपछि चाहे यूनिटको कुरामा एकदमै विचार पुराउनु पर्छ है भनेको छु ।
तपार्इको चाहना अनुसार उहाँले दिपाश्री निरौलालाई लैजाने सम्भावना के छ ?
त्यस्तो केही पनि छैन । यदि सबैजना जाने हो भने ‘छक्का पन्जा’ भइहाल्छ ।
पूजा शर्मा र शुर्दशन थापालाई तपार्इलाई सिनेमामा लिनको लागि ठूलै कसरत गर्नु पर्यो अर्थात माग्नेले भाउ खोज्यो भन्ने छ । यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
यो कुरा गलत हो । सुरुमा दिपा दिदीले हुन्छ नि त माग्ने सिनेमा खेल्छ भनेर भनिसकेपछि मलाई पूजाले दाई सिनेमा गर्ने हो ? भनेर सोध्नुभयो । पूजाले हामीले तपार्इसँग पहीलेबाट नै कुरा गर्न खोजेको हो तर बाहिर माग्नेले छोडेको रोल यसले पाएछ भन्ने खालको कुरा आउँछ त्यो भयो भने मज्जा आउँदैन भनेर मात्र हामीले भन्न नसकेको हो भन्नुभयो ।
त्यसको भोलिपल्ट दिपा दिदी हामी सँगै बस्यौ । त्यहाँ अलिकति कुरा भयो । त्यो पछि मलाई अफिसमा बोलाउनु भयो र कथा सुनाउनु भयो । मलाई कथा मन पर्यो । यस अघि मैले छोडेहोला झण्डै २२ वटा सिनेमा ।
तर कथा सुनेपछि यो सिनेमा १० लाख दिएभने भने म पक्कै गर्छु भन्ने लाग्यो । पहिलो चोटी भेटेर कुरा गर्दा नै मैले यो सिनेमामा काम गर्छु भन्ने लागेको थियो रे उहाँहरुलाई । यो कुरा उहाँहरुले एग्रिमेन्ट भइसकेपछि भन्नु भएको थियो । तर उहाँहरु परिश्रमिक घटाउने सोचमा भने हुनुन्थ्यो रे । – लुम्बिनि टाइम्स र गफगाफ डटकमकाे सहकार्य
जब अब्दुल कलाम पत्रिका बेच्थे